चीनको जेट सी ९१९ कहाँ उड्ला ? - Karobar National Economic Daily
चीनको जेट सी ९१९ कहाँ उड्ला ?
query_builderMay 23, 2017 10:55 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility6001
चीनको पहिलो जेटले मध्यम आकारका एयरबस र बोइङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी पहिलो परीक्षण उडान सफल भएको छ । कमर्सियल एयरक्राफ्ट कर्पोरेसन, चीन (कोमाक) ले बनाएको सी ९१९ को उडानका बारेमा तर्क भइरहन सक्छ ।
बारम्बारका मसिना परीक्षणले सांघाईस्थित यो कम्पनीले तयार पारेको सी ९१९ एयरबस ए ३२० अथवा बोइङ बी ७३७ को प्रतिस्पर्धी बनेको छ । यो संक्षिप्त योजना हो ः कोकाकले अन्तर्राष्ट्रिय साथी पाउनेछ र उच्च देशभक्ति भएको चीनले विश्वको उड्डयनको भीआईपी क्लबमा सहभागिता जनाउन सक्छ । तर, यो परीक्षण सकिएपछि सी ९१९ कसले उडाउला ?
प्रारम्भिक भविष्यवाणीले भन्छ, १ सय ५८ देखि १ सय ७४ सिटको प्लेनले चीन र यसप्रति सहानुभूति राख्ने केही देशमा बजार पाउनेछ, तर पश्चिममा राष्ट्र एक–दुईवटा मात्रै हुनेछन् । चिनियाँ मिडियाका अनुसार यो जेटले निम्नाअनुसार बजार पाउन सक्छ :
१. चीनको पत्थरिलो दुर्गम क्षेत्र ः परीक्षण उडान आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा अनिवार्य ग्रहणशील हुनु आवश्यक छ, जसमा उच्च र गर्मी दुवै क्षेत्र समावेश हुनुपर्छ । यो हवाईजहाज विभिन्न उचाइको तापक्रम र हावाको प्रेसरमा उड्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तिब्बतको ल्हासा र सिन्जिङको उरुम्की सहर उपयुक्त हुन्छ ।
२. चीनका सबै क्षेत्र : राज्यले सञ्चालन गरेको चाइना डेलीका अनुसार ५७० अर्डरमध्ये चिनियाँ एयरलाइन्सले ९० प्रतिशत बजार ओगट्छ । एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न, हैना एयरलाइन्स र सिचुआन एयरलाइन्सको सेवा खरिद गर्न क्रेताले समय लिएका छन् । चीनले बनाएको यो जहाज २ सयभन्दा बढी एयरपोर्टमा अवतरण हुन सक्छन् ।
सिचुआन एयरलाइन्सले सिचुआन क्षेत्रका दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा थुप्रै उडान गर्छ । भाडाका कम्पनीहरूले चीनका धेरैजसो क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी माग गरिसकेका छन् । “यो सञ्चालनमा आउनुअघि केही वर्ष त परीक्षण उडानमै बित्नेछ,” एस राजनारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज इन सिंगापोरका वरिष्ठ फेलो रिचार्ड बिट्जिंगर बताउँछन्, “त्यसैले केही समय स्थानीय रूपमा चीनभित्र मात्रै यो उड्नेछ ।”
३. चाइना डेलीका अनुसार बैंककमा रहेका सिटी एयरवेजले केही जेट सफलताका साथ सञ्चालनमा आउनुअघि नै माग गरेको छ । विकिपिडियामा उल्लेख भएअनुसार छवर्षे पुरानो यो एयरवेजका सातवटा प्लेन अघिल्लो वर्ष हङकङ उड्नुअघि सुरक्षाका कारण ग्राउन्डेड भएका थिए ।
४. अफ्रिका : चिनियाँ समाचारअनुसार अफ्रिकाबाट पनि केही पूर्वअर्डर प्राप्त भएको छ । तर, ती समाचारमा देश र एयरलाइन्सको नाम दिइएको छैन । तर, यसको केही अर्थ भने निकाल्न सकिन्छ । चीनले केही वर्षदेख अफ्रिकी देशहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको पहुँचका लागि विनिमय गर्दाका फाइदाबारे बताइरहेको छ । सी ९१९ सञ्चालन र मर्मत गर्न तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने चिनियाँ प्रतिवेदनले बताएको छ । लागतका बारेमा सचेत एयरलाइन्सहरूलाई यसले लोभ्याउन सक्छ ।
चिनियाँ सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने सी ९१९ का उत्पादकहरूले आर्थिक समर्थनका लागि अफ्रिकी एयरलाइन्ससँग सम्झौता गराउन सक्छन् । अफ्रिकासम्बन्धी विश्लेषकहरू ल्याटिन अमेरिकाले समेत यो जेट लिन सक्ने बताउँछन् ।
५. जर्मनी : पुरेन एयरलाइन्सले सातवटा सी९१९ अहिले नै अर्डर गरिसकेको छ । यो कम्पनी टाट पल्टिएपछि अहिले चिनियाँहरूले लगानी गरेका छन् । यो कम्पनीबाट जर्मनीमा यो जेटले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ । यो एयरलाइन्सको सुरुसँगै जेट पनि बनाइसक्ने योजना छ ।
राल्फ जेनिङ, फोब्र्स
चीन जेट सी